Aiza aza Andriamanitra amin'ity fahoriam=be eto Madagasikara ity kanefa ny fiangonana an'alin-kisa? - Dinika forum.serasera.org
Aiza aza Andriamanitra amin'ity fahoriam=be eto Madagasikara ity kanefa ny fiangonana an'alin-kisa?
Fitohizan'ny hafatra : Re: Aiza aza Andriamanitra amin'ity fahoriam=be eto Madagasikara ity kanefa ny fiangonana an'alin-kisa?
endriny - 11/10/2017 07:24
Ary tsy mpieboebo ve ireo misoratena fa mpaminany sy mpitondratenin'Atra? Aoka hazava
endriny - 11/10/2017 07:27
Nga ry Miharena mba manao ny fanaon'ny Demonia (tany) no mitaty vola amin'ny rakitra? Fa maninona raha arotsaka maimaipoana fotsiny io tsodranon 'Atra io? Sa ianareo no mpanera ny Fanjakan 'ny lanitra?
Miharena - 11/10/2017 17:15
Izay mahazo fitahiana sy fanomezam-pahasoavana no mizara ho an'ny namana fa tsy hoe misora-tena ho mpaminany na mpieboebo.
Fitiavana daholo izany.
rhaj0 - 12/10/2017 13:45
Ilay Fitiavana tsy "mifamaly" (reciproque), fa ny anareo manempotra sady saro-piaron-doza toa an'i Itsimahalalaafatsynyazy.
Sady ilay "Fitiavana" mba hoe torianareo anie ry Miharena ka tena "fampitahorana" ranofotsiny sy "fampanantenana poakaty" eee..
endriny - 13/10/2017 16:32
Fa iza moa no mpilaza fa mpitondratenin'i Jesosy sy Atra e? Ireo mpieboebo mazava ho azy.
Raha misy Kristianina iray Tena mino eto Madagasikara dia efa tsy teo io Pesta io. Hoy Jehovah tamiko
rhaj0 - 13/10/2017 21:35
Les églises et les temples se vident ! ... La peste aurait-elle tué la foi ?
1- Fa misy lapesta koa va re ao @ Tranon'Atra???
2- Dia i Atra mihintsy izany no mandefa io lapesta io ao an-tranoNY???
3- mila zahavina ao @ Baiboly fa nisy faminaniana @ lapesta ao, na @ lapesta@madaga
Ka tsapao mihintsy ny finoanao ry Miharena, dia ametraho tanana ny olona voan'ny lapesta any aa...
Raha TSY mahasitrana ianao ry Miharena, dia fantaro tsara fa satria TSY AMPY FINOANA i Miharena.
Miharena - 16/10/2017 20:50
Raha akapoka ilay resakareo mifanesy ireo Rhaj0 sy Endriny dia mazava be fa efa voatefy hatrany amboalohany ny sainareo hanohitra be fahatany izay lazain'ny Kristianina.
Ka mba alefaso mirindra aloha ilay fomba fisainana vao manohy resaka e!
Fitiavana anareo avokoa izany.
endriny - 17/10/2017 19:23
Ahoana moa ianao Miharena Kristianina no tsy ho toheriko. Ianao manondro Tena ho mpanera ny lanitra. Kanefa helikaoptera tokony andrarahana poizim-parasy aza tsy misy
endriny - 17/10/2017 19:26
Inona moa izany no mahasamihafa anao amin'ilay mpisoloky mpivarotra scoter baombi
Miharena - 20/10/2017 07:39
Mbola tsy mirindra ihany ilay fiheverana Endriny! Arindrao aloha fa aza mandeha any amin'ny resaka tsy fahampiana izay mety ho vokatry ny tsy fahaizan'ny olombelona mampiasa ny saina omena azy hampirindra ny fiaraha-moniny indray no entina hanoherana fa tsy misy Mpahary.
rhaj0 - 23/10/2017 19:31
Misy resaka momba ny tantaran'ny Lapesta vao reko io @ radio aty..
Tany @ 1898 tany no nanomboka niditra tany Madaga ny lapesta, avy tamina sambo avy tany India (voapetraka an-tsoratra ao @ arisivin'ny kolonia ao hono).
Fa tany Eoropa, dia nandringana ny mponina tany @ taon-jato XIV ny lapesta. Dia t@ ireny no nanomboka nihidy aman-trano tao @ maonasiterany ry pretra, fa TSY te-hifandraidray @ vahoaka voan'ny lapesta.
Dia t@ ireny koa, no nanomboka nivelatra ny haremben-dry Medicis, fa nahay nanararaotra iny epidémie iny zareo anaovana zafera.
Ka dia ianaro izany ny Tantara eee...
Ka ho an'i Hrnrn sy RBNIR manokana ohatra, dia
- mandehana mihidy any @ trano volamenanareo fa TSISY an'izany "fametraha-tanana" izany io, ary tiavo ny tenanao toa ny harenanao
- dia anaovy tori-teny manjamanja, youtuber-o mihintsy, ampiaraho resa-biboly ao ihany anefa ny @ "finoana sy ny 1/10", ampitomboana ny harembenareo ao ry RBNIR sy HRnrn aaa...
Fa dia hipetraka @ Tantara ny "voninahitr'Atra" eee....
Miharena - 24/10/2017 08:52
Ilay loha-hevitra nosokafana eto aloha dia miresaka hoe aiza Andriamanitra no tsy mahita ity fahoriam-be mihatra ity.
Ny lapesta dia hita io fa avy any ivelany fa tsy teto nefa efa fantatra fa tsy maintsy hanenika ny tany rehetra.
Amin'izao fotoana izao na any Etazonia aza mbola misy voan'ny lapesta ihany tsirairay.
Efa voalazan'i Jesoa ny fanoharana momba ny mpamafy izay namafy voa tsara nefa tonga ny ratsy fanahy namafy voa ratsy ihany koa ary samy miara-maniry izy ireo.
Dia izay resaka aretina rehetra dia voa ratsy afafin'ilay ratsy avokoa aloha.
Manana safidy ny olombelona hanaraka lalana roa dia ny tsara sy ny ratsy. Dia izay tafaroboka any amin'ny ratsy dia hiharatsy hatrany. Dieny mbola misy ny mananatra ankehitriny mampahafantatra izany dia tokony hararaotina mba hanaovana ny tsara sy hivavahana mafimafy kokoa mba tsy ho ringana noho ny tsy fahalalana.
Rehefa ampy vavaka tsy matin'ny aretina fa misy miaro hatrany. Mety hanao zava-poana izany fahamarinana izany isika nefa izay mijoro vaololombelona ihany no afaka manamporofo fa efa nositranina amin'nhy areti-mandringana.
endriny - 24/10/2017 16:34
Aleo arindrako tsara aza e: Noho ny tsy fahampian'ny fahalalana eo amin-draolona. Aleo ataoko mazava fa tsy hoe tsy ampy fisainana akory, fa tsy ampy fahalalana. Dia namorona izany atao hoe Atra izany Raolombelona mba hanatsotsorana ny kajy: Atra no nanao an'izao tontolo izao.
Fa raha anontanianao amin'izay Ireo mpilaza fa tsy maintsy nisy namorona izao tontolo izao hoe: Iza ary no namorona an'Atra? Dia miala any ilay valy boraingina amin'ny finoana mitampimaso hoe: Mistery tsy takatry ny sain'ny olona izany.
Azonao porofoina ve ny maha misy an'Atra?
rhaj0 - 24/10/2017 21:15
Ka mety tena hafa ny dikan'ny hoe "manome porofo" @ Miharena.
Siriko hatraty fa raha "porofo" no angatahan'i Endriny, dia "baiboly" sy "belazao" no mba (ho) "porofo" asesik'i Miharena eto, ampiany wa-wa-wa pensée mazika dia "tena izy" hono.
Tena "mino" aho, ary tapaho ny hohon'ankihikelitongotroko, fa TSY takatry Miharena akoriny mihintsy izany hoe, causalité sy correlation, na fotsiny koa hoe, evidence, na koa reproductibilité...
Miharena - 25/10/2017 05:37
Ny zavanisy ary misy no entina manamarina fa misy Andriamanitra sy Jesoa efa nirahiNY.
Miteny amin'ny olombelona IZY ireo ary manome anatra sy fahendrena ary fahalalana tsara ny momba AZY.
Efa porofo ny fisian'ny fifohazam-panahy be dia be hitantsika ankehitriny, ny fisian'ny asa fanasitranana sy fananganana ny maty hanaporofoan'ILAY MPAMORONA FA AZY NY AINA ARY IZY NO LOHARANO SY MAHALALA TSARA NY FAMERENANA SY FAKANA IO AINA IO.
Izay hafa milaza fa mahay ny tsiambaratelon'ny AINA nefa tsy mahavita manangana ary mety hilaza azy fa andriamanitra no mpisoloky.
Ka io anie na ho an-dRhaj0 na ho an'i Endriny, tsy hoe lavina dia hoe tsy misy fa MISY ary MIASA ary mitohy miresaka amin'ny olombelona noforoniNY.
IZY ihany koa anefa no manome safidy hoe hisaina araka ny lalan'ny tsy fahalalana sa hisaina araka ny lalan'ny Fahalalana ny olona e!
Efa anao moa io atidoha io fa dia azonao ampiasaina amin'ny tianao atao aminy koh! Fa matoa anefa misy ny anatra dia mazava fa tsy tian'ny Tompo Mpahary hampiasainao amin'ny tsy mety ilay atidoha efa nataoNY tsara sy lafatra araka ny fahaiza-manao tapitr'ohatra AZY.
endriny - 25/10/2017 07:11
Lazaiko marina dia marina aminareo tokoa, fa tsy misy mpisoloky lehibe ohatran'ny fiangonana sy ny Kristianina izay manandran-Tena ho mpanera ny lanitra.
tspoaeta - 25/10/2017 10:48
Mba marina moa?
Tsy mandaitra intsony ve ny vavaka tarihin-dry mopera sy pasitera isana'andro e?
Sa tsy misy Kristianina tena mino mihintsy eto? sa ilay Andriamanitra mihintsy no tsy misy, fa mpivarotra sakabeloha no betsaka?
TENA TONGA SAINA IANAO MARINA.
MAHAIZA MANDINIKA TSARA IHANY FA KELY SISA
Miharena - 25/10/2017 12:25
Diso fisainana ihany aloha no fahitako an'i Endriny satria ny fiangonana no sekoly fampianarana ny marina fa dia izay minia tsy mijery ihany no milaza habobo dia tsy miaiky mihitsy hoe habobo ny fandavana tsy misy farany apetrany hoe tsisy Mpahary izany, tsy misy mpanao ratsy izany sns...
Ka io faharatsiana io no mahatonga ny fitotonganana sy fahoriana fa tsy izay mitaiza ny olona ho olombanona sy feno.
rhaj0 - 25/10/2017 14:16
Miharena satria ny fiangonana no sekoly fampianarana ny marina
ka ny fiangonana Vatikanina azany ve no arahinao ry Miharena sa ny fiangonan'i Tsaratsara eee..
Eritrereto tsara ao, fa MIFANIPAKA ireo roa ireo an. ngo dia misabaka (toa ny fanaonao) mantsy i Miharena vao tataka eo...
Fa raha mahay Vatikanina ianao ry Miharena, dia ho tonga saina, fa efa elaela ihany izay no efa nibaradaka ny olombe tao, fa TSISY an'izany Andrmntra MIRESAKA mivantana izany, fa "inspiration" no izy. Tsy tadidiko fa raha tsy Benoa no niteny an'io dia i Fransoa. Asa izao ny Namana Katolika Tsara Sitra-Po raha mba ho avy eto hanamafy an'io...
Miharena - 25/10/2017 14:39
Samy afaka manao izay fandinihiny aby ny olona tsirairay araka ny tandrifiny momba ny fahalalany an'Andriamanitra. Mazava fa rehefa tsy mahazo ny fanomezana avy amin'ny Fanahy Masina tsy afaka hampita bitsika izany aloha ary tsy ho afaka ihany koa hamaritra marina ny momba an'Andriamanitra miasa amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana misy AZY.
Ka tsy hoe manaraka an'iza io na manaraka an'iza fa fantatra eny ihany hoe misy ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny olona tsirairay miteny. Ary io tsy hoe rehefa Katolika dia hoe izy rehetra manana fahalalana feno fa ampahany avy ihany ny fahalalan'ny olombelona.
Izay hiharan'ny fampahalalana an'Andriamanitra avy AMINY manokana dia hita eny hatrany ny fomba fampianarany. Ireo mpandalina manokana koa hita eny ihany ny fomba fanehoany hevitra. Ka raha ny fantatra dia mpandalina ny Papa François ary niharan'ny iraka lehibe Tsaratsara.
Izay aloha no azo lazaina momba izay.